Evergreen Phyo: 2009
အားလုံးမင်္ဂလာပါ...။ စာမရေးတာလဲအတော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ ဒီဘလော့ကိုတောင်မေ့နေလောက်ပါပြီ..။ ပျက်နေတဲ့ Laptop ကလဲမနေ့ကမှပြန်ရတာပါ..။ Service Center ကိုလဲရောက်တာဒီတစ်ခါနဲ့ဆို ၄ ခေါက်မြောက်ဖြစ်တာမို့ Warranty ယူထားတာ တော်တော်ကံကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်..(ဆရာမဂျူးရဲ့နောက်ဆုံးဝတ္ထုထဲကလိုဆိုရရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြော်အမြင် ရှိတယ်ပေါ့.. :D)။ Warranty ဖိုးကျေပါတယ်.. ၀န်ဆောင်မှု နဲ့ ပစ္စည်းတန်ဖိုး အားလုံးတစ်ပြားမှမပေးရပါဘူး.. စိတ်ချမ်းသာပါတယ်..။
မရေးတာကြာတော့ဘာရေးရမှန်းမသိပါဘူး.. :D ဘလော့လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားမှာစိုးလို့ရယ် ဘလော့ကညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံးကို သတိရတာရယ်ပေါင်းပြီးခုပို့စ်လေးတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့.. (စိတ်ထဲကပါလို့ တကယ်ပြောတယ်မှတ်ပါ.. =D)။ ဒီရက်ပိုင်း Avatar ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်တယ်..။ Titanic ၊ The Terminator စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေရိုက်ခဲ့တဲ့ နာမည်ကြီးဒါရိုက်တာ James Cameron ရိုက်ထားတာပါ..။ 3D Fusion Camera System သုံးထားတယ်ပြောတာဘဲ ရုပ်ရှင်ကြည့်တော့ အစပိုင်းနည်းနည်းမူးသလိုဘဲ.. နောက်ပိုင်းကျမှအဆင်ပြေသွားတယ်..။ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးမျောပါသွားတာ.. နောက်ဆုံးအပြီးသီချင်းဆုံးတဲ့အထိဘဲ..။ Effect တွေလည်းကောင်းတယ်..၊ ဇာတ်ကောင်တွေကလည်း တစ်ကယ်အသက်ဝင်ပါတယ်..၊ ဇာတ်လမ်းကလည်း တစ်ကယ် Emotional ဖြစ်ပါတယ်..။ သွားကြည့်သင့်တဲ့ကားပါ..5stars ပေးပါတယ်.. =D။ အပြီးသတ်သီချင်းလေး ရင်ထဲမှာစွဲကျန်ခဲ့ပါတယ်.. ခါတိုင်းဇာတ်လမ်းပြီးတာနဲ့ထပြန်တာပါ.. ဒီတစ်ခါတော့သီချင်းပြီးမှဘဲထပြန်ဖြစ်တယ်..။ နံမည်က I See You တဲ့ Leona Lewis ဆိုထားတာပါ.. (လိုရင်းက ခုမှရောက်တယ်) =D...။ ဆက်ပြီးအပျင်းထူလိုက် ပျောက်လိုက်ဖြစ်ပါအုန်းမယ်..။ နားထောင်ဖြစ်အောင်နားထောင်ကြည့်ကြပါ..။
Posted by Phyo Evergreen at 7:56 PM2comments Links to this post
အခုဒီဇင်ဘာလာရောက်လာပြီ... ဒီမှာ ရာသီဥတုကနည်းနည်းလေးအေးလာတော့ ... တောင်ကြီးမှာလည်းဘယ်လိုများအေးနေပြီလဲဆိုတာတွေးမိသည်..။ တွေးမိတော့ တဖြည်းဖြည်းလွမ်းမိလာသည်... ပြန်မရောက်ဖြစ်တာတောင် ၄ နှစ်ရှိတော့မည်..။ အရင်အတိုင်းဘဲ အရာအားလုံးမပြောင်းမလဲဘဲရှိနေအုံးမှာလား... ပြန်ရောက်ဖြစ်မှဘဲ သိရတော့မည်..။ ခေါင်မိုးနီနီတွေနဲ့ မြို့ကလေးရယ်..၊ မြူတွေလွှမ်းနေတဲ့ရှမ်းတောင်တန်းကြီးတွေရယ်.. အားလုံးကိုလွမ်းမိပါတယ်..။ အလွမ်းဓာတ်ခံရှိသူတွေအဖို့.. ဒီဇင်ဘာလဟာ အလွမ်းတွေကြားက ဆွတ်ပျံ့နေမှာပါ..။
အောက်ကသီချင်းလေးကို အမြဲနားထောင်ဖြစ်တယ်... အိမ်လွမ်းတိုင်းပေါ့..။
Posted by Phyo Evergreen at 9:18 AM 10 comments Links to this post
Posted by Phyo Evergreen at 7:32 PM 10 comments Links to this post
အစ်မအိမ့်ချမ်းမြေ့က သတိတရနဲ့တက်ဂ်ထားပါတယ်..။ အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုးရိုးသားသား စဉ်းစားထားတာလေးတွေကို ပြောပြချင်ပါတယ်..။
ကွဲကွာနေပြီးမတွေ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ခင်မင်တဲ့ဆွေမျိုးအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ တစ်ယောက်ချင်းစီကိုပြန်တွေ့ချင်တယ်။
အတူရှိနေစေချင်တဲ့သူတွေကတော့ မိသားစုနဲ့ ကိုယ့်အချစ်ဆုံးသူတွေပဲပေါ့.. တကယ့်ကိုနီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေချင်တယ်..။
ဟိုရှေးရှေးကလည်းက အခုလက်ရှိအချိန်အထိ လူတွေပြုလုပ်ဖန်တီးခဲ့သမျှအရာတွေအားလုံး တစ်ခဏချင်းပျောက်ကွယ်သွားမှာကိုတော့ တကယ်နှမြောမိတယ်..။ ကိုယ်တစ်ယောက်လည်းမဟုတ်ဘဲ လူသားအားလုံးကြုံတွေ့ကြရမှာဘဲဆိုတော့လဲ တရားမျှတပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
မရောက်ဖူးသေးတဲ့ သွားလည်ချင်တဲ့ ကမ္ဘာအနှံ့ကနေရာတွေကို မရောက်ဖြစ်လိုက်မှာအတွက်တော့ ၀မ်းနည်းမိမယ်ထင်တယ်။
နာကျင်နစ်မွန်းနေမှာကိုကြောက်တယ်.. ရေနစ်တာမျိုး၊မသေမရှင်ဖြစ်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူး။ မီးပွားစလေးတစ်စလိုဘဲ ဖျတ်ကနဲ ပျောက်ကွယ်သွားတာမျိုးဘဲဖြစ်ချင်ပါတယ်..။
အစားအသောက်နဲနဲကိုတော့ ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်ထားမယ်.. ဗိုက်ဆာမှာစိုးလို့.. :D
စာကြောင်းအချို့ ..ချိုချင်ချိုမယ်...ခါးချင်ရင်လည်းခါးသက်မယ် ဘာမှမသေချာပါဘူး
ဘ၀ဆိုတာဘာလဲလို့ဘဲ အထပ်ထပ်စဉ်းစားမိမယ်.. ပျက် ဖို့အတွက် ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်.. နောက်ထပ်ဘာမှထပ်မဖြစ်ချင်တော့ပါဘူး..။ ဖြစ်ခြင်းပျက်ခြင်းကင်းရာကိုဘဲရောက်ချင်ပါတယ်..။
အခုလက်ရှိနေနေတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ ဘ၀ကိုကျေနပ်တယ်.. အဲဒီအတွက်ကြောင့်ဘဲ
တစ်လအကြာမဟုတ်လဲ တစ်နေ့နေ့တော့ ဖြစ်မှာဘဲ..
(၁၁) ပြောချင် ကြားစေချင်တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်း
"who doesn't long for someone to hold;
who knows how to love you without being told;
somebody tell me why I'm on my own;
if there isasoul-mate for everyone?"
Posted by Phyo Evergreen at 2:14 AM5comments Links to this post
Posted by Phyo Evergreen at 5:21 PM3comments Links to this post
ပြီးတော့ အမှားတွေဟာ ကိုယ့်ကြောင့်ပါလို့သာ ရိုးရိုးဝန်ခံပါရစေ..
ဒါဟာ လွယ်ကူလွန်းတယ်လို့ မထင်ရသလို
ဒီလောက်ဒီ ခက်ခဲမယ်လို့လည်း ဘယ်သူတွေကမှ အသိမပေးခဲ့ဘူး..
တို့နှစ်ယောက် ကွေကွင်းရခြင်းဟာ ရှက်စရာတစ်ခုသာဆိုရင်..
The Scientist by Staecy Solomon ( Original Artist - Coldplay)
Posted by Phyo Evergreen at 9:45 PM2comments Links to this post
တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာ အယုတ်အလတ်အမြတ်မရွေး..ဖူးစာမှန်ရင် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်မိကြမှာဘဲ...။
အချစ်မှာ လိမ်လည်ဖြားယောင်းမှုတွေမလိုဘူး.. ရိုးသားမှု၊ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်မှုတွေဘဲ လိုမယ်ထင်တယ်။
ဒီ MV လေးကြည့်ဖြစ်နေတာကြာပြီ..သံစဉ်နဲ့စာသားကလေး ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး...ရယ်လဲရယ်ရတယ် ခဏခဏနားထောင်ဖြစ်ပါ တယ်..။
Posted by Phyo Evergreen at 12:30 AM6comments Links to this post
Posted by Phyo Evergreen at 2:18 AM5comments Links to this post
အနက်ရောင်လေးထောင့်ကွက်တွေက တိုက်တာတွေရဲ့နံရံမှာ ကိုယ်စီနေရာယူလို့.........
တစ်ပွင့်..နှစ်ပွင့်..သုံးပွင့် လောက်သာလင်းတဲ့ ကြယ်တွေကိုကြည့်ရင်း ..ငေးမောရင်း......... ညလေအေး အဝေ့မှာ တစုံတရာ.. တစုံတယောက်ကို လွမ်းဆွတ်မိလေသလား...မကွဲပြားတော့..........
ညအမှောင်ထဲ မဟူရာကျောက် ပျောက်လို့ဖွေရှာသလို... အဖြေမတွေ့ခဲ့..............
လေပြေနဲ့အတူ တိတ်တိတ်ပါလာလေတဲ့.. ထင်းရူးရနံ့တွေ ရင်ဆွေးဝေဒနာကို .. ချော့သိပ်ပေးနေရော့သလား.......
အသာအယာမှေးစင်းလိုက်တော့..တစ်ခဏအကြာ.... ခပ်ရှပ်ရှပ်သစ်ရွက်ခြောက်တွေကြား.. စည်းချက်မှန်မှန် ခြေသံကို ခပ်တိုးတိုးကြားတယ်............
ရင်တွေများ တဒိန်းဒိန်းခုန်လိုက်တာ..... သူမများ ပြန်လာရှာလေသလား...............
တားမရတဲ့ သိလိုစိတ်တို့ ... မြင်လွှာကို တိုးဖွင့်တဲ့အခါ..... အလျှင်တစော လှည့်ပတ်ရှာဖွေမိတဲ့အခါ................
ဆောင်းရဲ့ အရိပ်အငွေ့တွေကြား....... သူမ သဏ္ထာန်ကို ရေးရေးမြင်တယ်......
..................................................... သူ အသာခေါင်းညိမ့် မိပြီ................
သူမ ဖြည်းဖြည်းလျှောက်လာတော့ ....... သူအမြန် ပြေးသွားမိသည်....................
ညငှက်ငယ်သည်....... ည၏တေးသွားကို ချိုအေးအေးသီကျူးသည်.......................
လေညှင်းတို့ တသုန်သုတ် တိုက်လာသည်...................
....... သူမအား အသာအယာထွေးပွေ့လိုက်သည်.....................
အနက်ရောင်ကောင်းကင်မှ ဆီးနှင်းတို့ သည် ဖြူစင်စွာ.....များပြားစွာ.......ဖွေးဖွေးရွရွ ကျဆင်းလျက်...........................။
Posted by Phyo Evergreen at 2:49 AM2comments Links to this post
အေးစက်စက် ခံစားမှုကြောင့် အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလာသည်..။ ကားပေါ်ကလူတွေကိုကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်များများ အိပ်နေကြသည်..။ အချိန်ကြည့်မိတော့ နံနက်(၂)နာရီ.. နက်မှောင်နေသော သစ်ပင်တို့နှင့် တောင်ကုန်းတောင်တန်းတို့က ပြတင်းမှန်အပြင်ဘက်တွင် ငြိမ်သက်စွာအိပ်မောကျနေကြသည်။ ကားသည် တောင်ကုန်းတွေကြားတရိပ်ရိပ်ပြေးနေသည်.. မြေပြန့်မဟုတ်တော့သည်မို့ ပြင်းထန်တဲ့ အအေးဓာတ်က ကားအတွင်းသို့ပင်စိမ့်ဝင်လာလေပြီ။
ဂျာကင်အနွေးထည် ဇစ်ကို အဆုံးထိမြှင့်တင်လိုက်တော့ မှနည်းနည်း နေသာထိုင်သာရှိသွားသလို..။ ဒီလို အေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့တာ မမှားဘူးဆိုရင် ဆယ်စုနှစ်တစ်ဝက်တော့ ပြည့်ခဲ့ပြီ။ တောင်ပေါ်လမ်း ကရော အရင်လိုဘဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုနေအုံးမှာလား.. သိလိုမှုတွေကပြင်းပြလျက်။ အိပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့ အိတ်ထဲက သီချင်းနားထောင်စက်ကလေးကိုထုတ်ပြီး. သီချင်းနားထောင်ဖြစ်သည်။
သီချင်းသံက ကြည်လင်စွာ စီးမျောလာသည်..................
“တောင်ပေါ်လမ်းအတိုင်းကွေ့ကာ ၀ိုက်ကာ xxx.... ကိုယ်နေတဲ့ မွေးရပ်မြို့လေးဆီဦးတည်နေ..... xxx........အချိန်အကြာကြီးခွဲပြီး........xxx”
အိမ်ကိုသာ အမြန်ပြန်ရောက်လိုစိတ်က တားမရ ဆီးမရ လျှံကျလာသည်.... နာရီပိုင်းသာလိုတော့တဲ့ အချိန်ကာလကိုပင် မစောင့်စားနိုင်တော့..။ သက်ပြင်းတစ်ချက်ချမိတော့ အေးစက်တဲ့လေတစ်ချို့ လက်ချောင်းတွေဆီ ရိုက်ခတ်သွားသည်။
အပြင်ဘက်ကြည့်တော့ ပြာနက်နက်ကတ္တီပါကောင်းကင်မှာ ခပ်စိပ်စိပ်ကြယ်တို့က အရောင်တောက်လျက်...။ ကြယ်ရောင်တွေအောက် ထင်းရှုးတောအုပ်တို့က ငြိမ်သက်စွာ ၀ပ်ဆင်းလို့။ မြင်ကွင်းသရုပ်တို့ က အုံ့မှိုင်းနေတဲ့ သတိရမှုတွေကို ခပ်သည်းသည်းရွာကျသွားစေတယ်..။ ခပ်ရေးရေးအတိတ်တို့က နာကျင်နေသောနှလုံးသားဝယ် တဆစ်ဆစ်ကိုက်ခဲလာသည်။
“သား .. သားပြန်လာချိန်ကို မင်းအမေနဲ့အတူစောင့်နေမယ်”
“အဖွားကို ပြန်လာတွေ့အုံးနော်.. ငါ့မြေး”
“သူငယ်ချင်း မင်းပြန်လာမယ်လို့ ငါယုံတယ်”
ပဲ့တင်သံတို့က သီချင်းသံကိုပင် ဖုံးလွှမ်းသွားလောက်အောင်ပင် ထပ်ခါထပ်ခါ......။ သီချင်းသံကို အနည်းငယ်မြင့်လိုက်သည်..... အာရုံပြောင်းသွားစေနိုင်အောင်လို့........။ သီချင်းသံက ခပ်အေးအေးလေး
ခင်တွယ်စရာဆိုလဲ တို့ရိုးရာအမျိုးရှိလျက်နဲ့ .... xxx........ပြန်လာပါရှမ်းတောင်တန်းဆီကိုကွယ်...xxx....”
ကားအတူစီးလာတဲ့ ခရီးသည်တွေကတော့ အိပ်မောကျနေလေရဲ့.....။ ကားမီးရောင်အောက်မှာ မိုင်တိုင် ဖြူဖြူများက တစ်ခုပြီးတစ်ခု နှုတ်ဆက်ကျန်ရစ်သည်...။ အတွေးတွေကြောင့် သူမျက်လုံးများသည်... မှုန်မှိုင်းနေသယောင်....။ ကားသည်... နက်မှောင်မှောင်တောင်ကုန်းတောင်တန်းတွေ ကိုဖြတ်ကျော်လာခဲ့သည်..။ အချိန်အားဖြင့် ၆ နာရီထိုးလုပြီ... နေခြည်အလင်းသည်... တိမ်တိုက်တွေကြားမှာ ဖြာဆင်းလာသည်......။ ထင်းရှူးတောတို့သည်... နေရောင်နှင့်အတူ အစိမ်းရင့်ရောင်တောက်၍ နိုးထလာလေသည်..။ တောင်တွေဆီမှာ ရစ်သိုင်းနေကြသော မြူနှင်းတွေကိုတော့ သူတမ်းတစွာ လှမ်းမျှော်ကြည့်မိသည်...။
သူတစ်ခါက ရင်းနှီးဖူးခဲ့သော မြို့ငယ်လေးတစ်ခုဆီကားဖြတ်သွားသည်..။ မြို့လယ်ကစေတီ၊ ဈေး နှင့် ကျောင်း အားလုံးမပြောင်းလဲသေး.. အတိတ်ကာလတစ်ခုဆီ ပြန်ရောက်သွားသလိုပင်...။ ကြည့်ရင် ကြည့်ရင်းပင် မြို့ကလေးသည် ငြိမ်သက်ဝပ်စင်းစွာကျန်ခဲ့သည်.......။ ကားတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ချယ်ရီတွေတော့ ဖူးပွင့်နေပြီ...... သူတောင့်တခဲ့သော ချယ်ရီမြို့မှာရော ဖူးပွင့်နေပြီလား......။
မြေနီနီတောင်ကုန်းတွေ ၊ မှိုင်းညို့နေတဲ့ထင်းရူးတောအုပ်တွေ.. အားလုံးဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်.. သူချစ်သောမြို့သည် ချယ်ရီတို့ဖြင့် သူ့ကိုကြိုဆိုနေလေပြီ......။ အဲသည်မှာ သူချစ်သည့် ခေါင်မိုးနီနီအိမ်လေးတွေ၊ ချယ်ရီတွေ၊ နွေးထွေးတဲ့ တောင်ပေါ်သားတွေ ၊ ထင်းရူးတောစပ်က လမ်းကလေးတွေ ... ပြီးတော့ ချစ်တဲ့..သူငယ်ချင်းတွေ... ချစ်တဲ့..အိမ်ကလေး.. ချစ်တဲ့...မိသားစု.. ချစ်တဲ့...မေမေ.. ပြီးတော့ သူချစ်တဲ့ ချစ်တဲ့..ချစ်တဲ့........................................................
Posted by Phyo Evergreen at 6:56 PM3comments Links to this post
ဒီနေ့လည်း အရသာရှိတဲ့ပို့လေးတစ်ပုဒ်တစ်ချင်ပါတယ်..။ အစားအကြောင်းချဲချဲ တင်နေတော့ ... လာဖတ်တဲ့သူတွေကိုလည်း အစားပုပ်တယ်ထင်မှာလည်း စိုးပါတယ်.. အပြင်မှာအစားမပုပ်ပါဘူး။
မနေ့ညပိုင်းလောက် (လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီ) City Hall, Peninsula Plaza ဘက်ပျင်းလို့ရောက်ဖြစ်ပါတယ်..။ အချိန်ကြည့်တော့ ထမင်းစားချိန်လည်းရောက်ပြီဆိုတော့ အစားစားဖို့ စပြီးစဉ်းစားပါတယ်..။ ထမင်းလဲမစားချင်ဆိုတော့ ဘာရမလဲစဉ်းစားရင်းနဲ့ဘဲ.. မြေညီထပ်က လွိုင်နိုင်းကို သတိရပြီး အဲဒီမှာဘဲ ညနေစာစားဖြစ်ပါတယ်..။ လွိုင်နိုင်းက အစားအသောက်တွေ အရင်ကလည်းစားဖူးပါတယ်... မဆိုးဘူး စားကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်..။ ဆိုင်လေးကတော့ တော်တော်လေး ကျဉ်းနေပါတယ်.. စားပွဲခြောက်ခုံလောက်ဘဲရှိတယ်..။
ဟိုနေ့ကတည်းက မြူးဘလော့ မှာတိုဖူးပျော့ဆိုတာနဲ့ တိုဖူးနွေးစားချင်သွားတာ...။ ဒီနေ့တော့ ရောဂါကကျွမ်းနေပြီဆိုတော့ တိုဖူးနွေးဘဲမှာစားဖြစ်ပါတယ်... အာသာလေးပြေမလားလို့..။ အသားနဲ့ ခေါက်ဆွဲနဲ့ အီကြာကွေးတို့နဲ့ စားဖြစ်ပါတယ်..။ ခေါက်ဆွဲက မမာမပျော့အနေတော် ၊ တိုဖူးကလည်း ညက်ညက်နဲ့မို့ အရသာလည်းရှိ စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်...။ အီကြာကွေးနဲ့မို့ ပိုလည်းစားလို့ကောင်း ဗိုက်လည်းဝပါတယ်..။
ငယ်ငယ်က တောင်ကြီးမှာ အိမ်ကလူတွေ တိုဖူးနွေးဝယ်စားကြရင် လုံးဝမစားဘူး.. လာကျွေးရင် မကြိုက်ဘူး မစားဘူးဆိုပြီး ခံငြင်းတာ.. တကယ်လဲ မြည်းမကြည့်ဘဲနဲ့လေ...။ နောက်တော့ စမ်းစားကြည့်တော့ ကြိုက်ပြီး မနက်တိုင်း စားမယ်ဖြစ်ရော.....။ မှတ်မိသလောက်တော့ အိမ်မှာ တစ်ခါမှမချက်စားဖူးဘူး.. ရှမ်းခေါက်ဆွဲတို့ မြီးရှည်တို့လောက်ဘဲ ချက်စားဖြစ်တယ်.. ။ ကျောင်းဖွင့်ရက်မနက်မနက်ဆိုရင် ငါးဆင့်ချိုင့်ကြီးနဲ့ တိုဖူးနွေးသွားဝယ်ခိုင်းပြီ... စားရင်လည်း ပန်းကန်ထဲပြောင်းမထည့်ဘူး.. ချိုင့်နဲ့ကိုစားတယ်..။ ပိုအရသာတွေ့သလိုဘဲ... တကယ်တော့ တူတူပါ။ တခါတလေ ၀ယ်လို့ပြန်လာပြီး ချိုင့်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရင် ခဲနေပြီ ရာသီဥတုကအေးတာကိုး...။ အဲသလိုမျိုးဆိုရင် ချိုင့်ကို မီးဖိုပေါ်ပြန်တင်ပြီး တိုဖူးပျော်အောင်စောင့်ပြီးမှ စားရတာ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင်တော့ မောင်နှမတွေ ကားနဲ့ သစ်တောရပ်ကွက်က ဆိုင်မှာသွားစားတာဘဲ..။ ဆိုင်သာဆိုတယ်.. အိမ် တံစက်မြိတ်အောက်မှာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က ထိုင်ခုံပုလေးတွေ ချထားတာ...။ ကိ်ုယ်စားမဲ့ ပွဲပြင်ပေးရင်လည်း ကြည့်ချင်သေးတာ..။ တိုဖူးကျိုထားတဲ့အိုးကြီးက အကြီးကြီး ပွက်နေတာ..... ပြီးမှ ခေါက်ဆွဲကို အဆုပ်လိုက် အိုးထဲပစ်ထည့်လိုက်တာ........... ။ တိုဖူးကပျစ်နေတော့ ခေါက်ဆွဲက ပြန်မသွားဘူးလေ.. ပြီးမှတူအကြီးကြီးနဲ့ဆယ်ပြီး ပန်းကန်ထဲထည့်ပေးတာ...။ တောင်ကြီးမှာတော့ အသားနဲ့မစားကြဘူး..... ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်ရယ်၊ မြေပဲထောင်းရယ်၊ ဆား(အချိုမှုန့်) နည်းနည်း၊ အချိုရည်(ကြံသကာရည်ထင်တာဘဲ) ၊ ငရုတ်သီးကြော် ရယ် ထည့်စားကြတာဘဲ...။ တစ်ခါခါစားရင်တော့ နှစ်ပွဲ လောက်ကအသာလေးဘဲ.. အ်ိမ်ကိုတောင် ၀ယ်ပြန်ရင်ပြန်သေးတာ......။ အထမ်းနဲ့ရောင်းတာမျိုးလည်းရှိတယ်... စားနေကျအသည်က တာမားဆိုလား.. တရုတ်မကြီးရောင်းတာ..။ သူလာပြီဆို သွားဝယ်စားတာ ဟိုဟာပိုထည့်ပေး ဒီဟာ လျှော့ထည့်ပေးဆိုပြီးလည်း ချေးများသေးတာ.. ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ပျော်စရာတော့ ကောင်းသားပဲလေ.....။
စားပြီးတော့ ဆက်သွားဖြစ်သေးတယ်..။ အောက်က Bonus!
Posted by Phyo Evergreen at 12:05 AM9comments Links to this post
Labels: အစားအသောက်, အလွမ်း
ညက နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ခဲ့သည်ထင်... မနက်နိုးလာတော့ ကြည်လင်လန်းဆန်းနေသည်...။ ပိတ်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် အလုပ်မှနားသည် အလုပ်လုပ်စရာမလိုဟူသောအသိကြောင့်လို့ ဆိုလျှင်ပိုမှန်မည်.....။ ရေချိုး အ၀တ်အစားလဲပြီး နံနက်စားစားဖို့ မီးဖိုချောင်ဆီသွားတော့ အိုးပူပူ ဆီပူပူမှာလှိမ့်ထားသော ထမင်းကြော်ရနံ့က ဆီးကြိုသည်..။
“ မေ.... ဒီနေ့ထမင်းကြော်လား.....”
“သားကလဲ သိရဲ့သားနဲ့ လာမေးနေပြန်ပြီ..... လက်ဖက်ရည်တော့မဖျော်ရသေးဘူး...
သားဖျော်လိုက်ပါလား.. အမေက သားဖျော်တာသောက်ချင်တာ........”
အမေကြော်ပေးသော ထမင်းကြော်သည်.. ချမ်းအေးအေးနံနက်ခင်းတွင် ၀မ်းနွေးစရာ အစာအာဟာရတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်..။ ထမင်းကြော်မဆိုထားနှင့် အမေလုပ်ပေးသမျှ အစားအစာမှန်သမျှသည်.. သူ့အတွက်တော့ အကောင်းမွန်ဆုံးအစားအစာများပင်ဖြစ်သည်..။
နံနက်စောစောဖြစ်သောကြောင့် ရာသီဥတုသည်အေးစိမ့်ပြီး... ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမြူတွေနှင့် မှုန်ဝါးနေသည်...။ အမေရော သူပါ ဒီလိုရာသီဥတုမျိုးတွင် လမ်းလျှောက်ထွက်ရသည်ကို သဘောကျသည်...။
“မေ သားတို့ ပန်းခြံသွားမလား.. ဒီနေ့လမ်းလျှောက်လို့ကောင်းမယ်..”
“ကောင်းသားဘဲ ... သားဘယ်တော့သွားမလဲ...”
“ခဏနေသွားမယ်..မေ အပြန်ကျရင် ကျောင်းလဲဝင်ရဦးမယ်... ဒီနေ့ အလှူရှင်တွေရှိတယ်.. ခုလောက်ထွက်မှ အတော်ဘဲ”
“ဒါဆို အမေ အ၀တ်အစားသွားလဲလိုက်မယ်..................”
ကားဖြူလေးသည်.. လမ်းတစ်လျှောက်ဖြောင့်ဖြောင့်ပြေးကာ .. တောင်ခြေရှိ ပန်းခြံသို့ဦးတည်နေသည်..... မြူနှင်းတွေကတော့ သိပ်သည်းနေဆဲ...။ ဒီပန်းခြံလေးကတော့ အမေနှင့်သူ... အမောပြေရာ..အမေဖြေနေကြ နေရာလေးတစ်ခု လို့ပြောလို့ရသည်...။
“ဟာ .. အန်တီနဲ့ အစ်ကို အစောကြီးပါလားဗျ... နေကောင်းကြတယ်နော်...”
“အေး မောင်ကျော်ရယ် နေကောင်းပါတယ်ကွယ်... ဒီနေ့ရာသီဥတုက အန်တီတို့အကြိုက်မို့ ပန်းတွေလည်းကြည့်ရအောင်ဆိုပြီး လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာ..”
“ပန်းခူးတဲ့သူက ခူး ၊ တစ်ချို့က ရေလောင်းပေါင်းသင်နေကြတယ် အစ်ကို”
“ကောင်းတယ်.. လုပ်စရာရှိတာသွားလုပ်တော့ .. ဟိုဘက်လမ်းလျှောက်ထွက်လိုက်ဦးမယ်... ”
ဒီပန်းခြံလေး စပြီးဆောက်ခဲ့သည်မှာအချိန်အားဖြင့် ၅ နှစ်ကျော် ရှိပြီဖြစ်သည်........။ ဒီနှစ်များအတွင်း ပန်းလာကြည့်သူ ၊ ၀ယ်သူ ၊ လာရောက်လည်ပတ်သူတို့နှင့်လည်း စည်ကားခဲ့သည်...။ ဒီတောင်ခြေကနေရာလေးသည်... သူစိတ်ကူးထားသည်နှင့် အံကိုက်ပင်ဖြစ်နေသည်။ နံနက်စောစောတွင် ပွင့်တတ်သောပန်းတို့၏သင်းရနံ့က လာရောက်သူကို ကြည်နူးချမ်းမြေ့စေသည်မှာ အမှန်ပင်...။ အမေ့ကိုကြည့်တော့ ဘုရားတင်ဖို့ နှင်းဆီပန်းတွေခူးရင်း ပြုံးနေသည်...။ ရေကန်ငယ်လေးကိုကြည့်တော့ ရေငွေ့တွေဝေနေသည်.........။ ငှက်ကလေးများကကျီကျီကျာကျာနှင့် ...ထင်းရှူးပင်တွေပေါ်မှာတော့ ရှဉ့်လေးတွေ တစ်ပင်နှင့်တစ်ပင်ခုန်ကူးနေသည်...။
“သား အချိန်လဲကြည့်ဦး.. ခဏနေ ကျောင်းသွားဖို့နောက်ကျနေမယ်နော်...”
“ဟုတ်သားဘဲ.မေ... ခုလောက်ထွက်ရင် အတော်ဘဲနေမှာ”
ကျောင်းရှေ့ရောက်တော့ ကလေးတွေ မြေကွက်လပ်မှာ ဆော့နေကြသည်...။ ကျောင်းတံခါးကို ကျော်ရုံရှိသေး...
“ဟာ ဟိုမှာ ဦးဦးနဲ့ဖွားဖွားလာပြီ... လာကြဟေ့....”
အသံသေးသေးဆူဆူလေးများဖြင့် တစ်ယောက်တစ်ပေါက်အော်က အလုအယက်ပြေးလာကြသည်....။ ပကတိ ဖြူစင်ကြည်လင်နေသော မျက်နှာလေးတွေကိုကြည့်ရသည်မှာ.. စိတ်ချမ်းမြေ့စရာဖြစ်သည်..။
“ဦးလေးနဲ့ အန်တီ အလှူရှင်တွေရောက်နေကြပြီလား........”
“ခုနလေးတင်ဘဲရောက်တယ် သားရေ... ဧည့်ခန်းထဲမှာစောင့်နေကြတယ်..”
“ကျွန်မတို့တောင်နောက်ကျနေပြီ ... ပန်းခြံသွားပြီး ပန်းတွေခူးနေတာလေ.....”
“ကျွန်တော်တို့ မိဘမဲ့ဂေဟာကို ခုလိုတကူးတက လာရောက်လှူဒါန်းပေးတာ ကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးပါဘူး”
“ရပါတယ်... ကျွန်တော်တို့ကလည်း ခုလို တကယ်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကို လှူခွင့်ရတာကိုပဲ ၀မ်းမြောက်လှပါပြီ... ”
“နေ့လည်စာ ထမင်းစားသွားပါဦးလားဗျာ... ...”
“ဟား ... ဆာနေတာနဲ့အတော်ဘဲ...”
ကလေးတွေပျော်ပျော်ပါးပါးစားသောက်နေကြတာကို ကြည့်ပြီး စိတ်ကြည်နူးရသည်..။ ဒီကျောင်းသည်... သူ့ဘ၀၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်.....။ ကျောင်းဟုခေါ်ရလောက်အောင်တော့ မပြီးပြည့်စုံသေး... ဆရာအင်အားနှင့် ကျောင်းဆောင်လည်း တိုးချဲ့ဖို့လိုသေးသည်...။ တော်တော်လည်း ပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ဖို့တော့ ကြိုးစားရပေဦးမည်..။
“သား... အမေတော့ ဒီမှာဆက်နေလိုက်ဦးမယ်... ညနေမှဘဲ လာကြိုတော့လေ”
“ရတယ်..မေ.. ခဏနေတော့သွားဖို့တစ်ခုရှိတယ်... ”
“မစားတော့ဘူးမေ.. ဟိုရောက်မှဘဲ စားတော့မယ်...”
ခဏကြာတော့ အမေ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်လာခဲ့သည်...။ ချိန်းထားသည့်နေရာနှင့် ကသိပ်မဝေး ၁၀ မိနစ်လောက်သာ ကားမောင်းရသည်...။ သူ့အကျင့်အတိုင်း.. အချိန်စောရောက်နေခဲ့သည်...။
စားသောက်ဆိုင်သည်... တောင်ကုန်းပေါ်တွင်ဆောက်ထားသောကြောင့် .. ပြတင်းပေါက်မှကြည့်လျှင်မြို့ရှုခင်း
တော်တော်များများကိုမြင်ရသည်...။ ခေါင်မိုးနီနီနှင့် အိမ်ကလေးတွေ...၊ ဟိုးအဝေးက မြူတွေအုံ့နေတဲ့တောင်ပြာတန်းတွေ ၊ စိမ်းမှောင်မှောင် ထင်းရှူးတောအုပ်တွေ အားလုံးမြင်ရသည်..။ တောင်ကုန်းစိမ်းစိမ်းပေါ်က ဖြူပုပုနဲ့ ပေါ်လွင်နေသည့် ဒီစားသောက်ဆိုင်လေးမှာတွေ့ရန် သူကိုယ်တိုင် စိတ်ကြိုက်ရွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်...။ စားပွဲခင်း ၀ါဝါနုနုနှင့်... ပန်းအိုးဖြူဖြူထဲက နှင်းဆီနီနီတို့ လိုက်ဖက်သည်ကိုလည်း ကြည့်ပြီး ပြုံးမိသည်..။ တံခါးပေါက်မှာ ခေါင်းလောင်းသံလွင်လွင်လေးကြားရပြီး မကြာမီ အဖြူရောင်ဖဲကြိုးလေး တစ်စ လွင့်လာသလို ခံစားရသည်..။
“ဟုတ်ပါတယ်.. မ-- လားဗျာ..”
နေ့လည်စားစားပြီးချိန်တွင် .... Bee Gees ရဲ့ To Love Somebody သီချင်းသံကပျံ့လွင့်လာသည်...။ အပြုံးလေးတစ်ပွင့် လက်သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်....။
တောင်ကုန်းပေါ်ကဆင်းတော့ လိပ်ပြာလေးနှစ်ကောင် လှေကားထစ်တလျှောက်ဝဲပျံသွားသည်...။ ကောင်းကင်ကြည့်တော့ တိမ်တိုက်တွေ တဖြည်းဖြည်းစုသွားသည်..။ နေခြည်တန်းလေးတစ်ခု တိမ်တွေကြားက လှပစွာ ဆင်းသက်လာသည်........................။
မြူးတက်ဂ်ထားတဲ့ ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒအကြောင်းကို နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ ပုံဖော်ကြည့်တာပါ...။
Posted by Phyo Evergreen at 8:06 PM4comments Links to this post
ခု ၁၂ နာရီကျော်သွားပြီတော့ မနေ့က စားဖြစ်ခဲ့တဲ့ညနေစာပေါ့..။ ဒီတစ်ခါလဲ Kopitiam မှာဘဲစားဖြစ်ပြန်ပါတယ်..။ ဘယ်မှာလဲလို့ မေးရင် ... Jurong Point အပေါ်ဆုံးထပ်မှာပါ..။ ဆိုက်နံမည်တော့ မှတ်လာခဲ့တယ်.. Jeffery's Kitchen ဆိုလား... ဟိုတစ်ခါစားခဲ့တဲ့ ထိုင်ဝမ်ဆိုင်နဲ့ ကပ်ရပ်ပါ..။ ထမင်းကြော်ဆိုတော့ ထူးထူးဆန်းဆန်း အစားအစာမဟုတ်ပါဘူး.. မစားရတာတော်တော်ကြာလို့ စားချင်လို့ အလွမ်းပြေ စားတာပါ..။ ခုတောင် အစာမကြေသေးဘူး.. =D။
ပုံထဲက ထမင်းကြော်ထဲမှာ .. ပုဇွန်၊ ပြောင်းဖူးစေ့၊ ရွှေပဲစေ့ ပြီးတော့ အပေါ်မှာကြက်ဥကြော်တစ်ခုပါပါတယ်..။ ဒါပါဘဲ ဘာမှ ထူးထူးဆန်းဆန်းမပါပါဘူး....S$၄ ကျပ် ပေးရပါတယ်..။ မဆိုးပါဘူး..စားကောင်းပါတယ်... rating ပေးရရင်တော့ ၂.၅/၅ ပါ (အဲ အဲ ရုပ်ရှင်နဲ့ရောကုန်ပြီ ..=D)။ အချဉ်ရည်တော့ ပေးတယ်... ချဉ်လွန်းလို့မစားနိုင်ဘူးး..။ ပုံမှာက အမြင်လှအောင် ပုဇွန်ပေါ်လေး နည်းနည်းတင်ထားတာ......။ ရှုစားကြပါကုန်... (ရှုပဲ ရှုလို့ရမယ်.. စားတာကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ဘဲ ၀ယ်စားကြပါလို့.. :P)။
တကယ်စားချင်တာက ဒီလိုမျိုးထမင်းကြော်မဟုတ်ဘူး.. အမေနဲ့ တောင်ကြီးကအဘွားကြော်ပေးတဲ့ထမင်းကြော်မျိုး စားချင်တာ..။ အမေကြော်တာကတော့ ရိုးရိုးပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းကြော်ပါဘဲ...။ ကြက်သွန်နီကြော် ၊ ပဲပြုတ်နဲ့ ထမင်းကို ဆီပူပူမှာလှိမ့်လိုက်တာဘဲ..။ မနက်စောစော လက်ဖက်ရည်လေးနဲ့ ဆိုရင်တော့ အလွန်ကောင်းပါတယ်..။ အဘွားကြော်ပေးတာကျ တစ်မျိုး.. ထမင်းချဲချဲကို ငါးကြော်ဆီ နည်နည်းလေးနဲ့ မီးပူပူမှာ လှိမ့်လိုက်တာဘဲ..ထမင်းလှော်သလိုမျိုးဖြစ်နေတာပါ။ ဆီသိပ်မများဘဲနဲ့ ထမင်းဝါ၀ါမွှေးမွှေးလေး.. ပူပူလေးစားလို့ကောင်းတယ်..။ အဲဒီထမင်းကိုမှ ပဲပုတ်ကင်လေးနဲ့ စားကြတာပါ... အိမ်က အစ်ကိုနဲ့ အစ်မ ( ၀မ်းကွဲတွေ) ကတော့ အဲဒီပဲပုတ်နဲ့စားတယ်..။ ကျွန်တော်ကတော့ ပဲပုတ်စေ့ကြော်နဲ့စားတယ်..။ ပဲပုတ်စေ့ကို ဂျူးမြစ်၊ ငရုတ်ပွတို့နဲ့ ကြော်ထားတာ.. ဆိမ့်စပ်စပ်လေး မွှေးမွှေးလေး (ပဲပုပ်ချပ်လို အနံ့မပြင်းဘူး) စားကောင်းတယ်..(ကိုယ်ကြိုက်တာကျတော့ မွှေးမွှေးလေးတဲ့.. ဟီဟိ) ။ ပဲပုတ်စေ့ကြော်က ၀က်သားဟင်းနဲ့ဆိုလိုက်တယ်..။ တစ်ခါတစ်လေ အဲဒီဟင်းတွေနဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီး လူကငိုက်လာရော... ပဲပုတ်စားပြီး ခေါင်းပြားအောင်အိပ် သလိုဘဲ.. တုံးကနဲကို အိပ်ပျော်ရော..။ အင်း.. တစ်ခါတစ်လေလည်း.. အဲသလို အချိန်လေးတွေပြန်သတိရမိတော့ ..အမေကိုလွမ်း..အဘွားကိုအောက်မေ့ ..ရှမ်းပြည်ကိုလည်း သတိရမိတော့တာပါဘဲ...။
Posted by Phyo Evergreen at 12:36 AM5comments Links to this post
Telok Blangah Hill နှင့် Henderson Waves သို့အလည်တစ်ခေါက်
မနေ့ညနေပိုင်းက.. သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး Telok Blangah Hill နဲ့ Henderson Waves ဆီသွားဖြစ်ခဲ့တယ်..။ ဒီလိုမျိုး စုပြီး အပြင်မထွက်ဖြစ်တာကြာလို့ အားလုံးစိတ်ပြေလက်ပျောက် ဖြစ်အောင် သွားကြတာပါ..။ ရာသီဥတုလည်း သာယာတာကြောင့် အားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ ချီတက်ဖြစ်ကြတယ်..။ သွားရင်းနဲ့လည်း ဓာတ်ပုံတစ်ချို့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ဒါက Alexandra Road ကိုဖြတ်ပြီး ဆောက်ထားတဲ့ တံတား.. လှလို့ သဘောကျလို့ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်..။
Posted by Phyo Evergreen at 11:37 PM2comments Links to this post
Labels: ဓာတ်ပုံ, အလည်ခရီး
Telok Blangah Hill နှင့် Henderson Waves သို့အလည်တ...